7 Febroary 2018 : Fanomezana ho an’ny AV7 ny fiarahana amin-dRavalomanana -
AccueilRaharaham-pirenena7 Febroary 2018 : Fanomezana ho an’ny AV7 ny fiarahana amin-dRavalomanana
07/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maty momoka ny tolona, ary matimaty foana ireo izay voatifitra nandritra ny hetsika fitaritan’olona ho eny Ambohitsorohitra, izay faritra mena ny 7 feboary 2009, ankehitriny mantsy dia tsy tazana intsony ny mpitarika ny vahoaka hatao sorona, ary na hetsika mba ahatsiarovana ireo lavo aza toa nodiana fanina. Tsy hisy afa-tsy ireo mpitaty ra-kena toa an-dry Pierre Houlder sisa no irahina, izany hoe atao “coursier” hanatitra voninkazo eny Antaninarenina, ary dia hisehoseho amin’ ny haino aman-jery. Itony mpitaty ra-kena itony anefa, izay tsy misy hiraharahian’ny mpanara-dia ny tompon’ny fitaritan’olona teny Ambohitsorohitra azy mihitsy. Anisan’ny tokony mahatonga saina ny rehetra amin’ireo mpanao politika tahaka izao ataon’ny filohan’ ny Tetezamita teo aloha izao ny tsy firaharahiany ny ràn’ny Malagasy latsaka. Azo lazaina noho izany fa manao fitaovana ahazoana izay hirihany fotsiny sisa i Andry Rajoelina sy ny ekipany, fa ny rà latsaka amin’izy ireo dia latsadatsa-poana. Azo hatokisana ve noho izany ny toe-tsaina tahaka izao, indrindra amin’ny fitaritana ny firenena, satria na dia ireo olona namoy ny ainy noho ilay fitia aza tsy tsaroana intsony. Aleony mialokaloka maka rivotra any ivelany toa izay hahatsiaro ireo nandatsaka ny ainy ho amin’ny sezany, dia ireto “coursier” ho an’ny rahampitso irahina hanatitra voninkazo izany dia hamendrofendro fotsiny ihany ireo havan’ny maty, sy ireo izay niharam-boina mitondra takaitra mandra-maty.
Fa amin’izao fahatsiarovana ny faha-9 taona ny 7 febroary 2009 izao, dia anisan’ny tsy nanadino ireo niharam-boina anefa i Andry Rajoelina, fa nitondra fanomezana ho azy ireo tsirairay avy, tsy inona izany fa ny fiarahany indray amin’ilay nanome baiko hitifitra ireo nanolotra ny ainy noho ilay fitia. Anisan’ny fanomezana goavana tokoa natolony ireo mpikambana amin’ny Av7 tokoa mantsy ny filazan’i Andry Rajoelina fa “tsy manana olana amin-dRavalomanana aho”, fa midika kosa izany hoe ireo voatifitra niakatra teny Ambohitsorohitra notarihin-dRajoelina hatao sorona notifirin- dRavalomanana no manana olana aminy. Manoloana izany dia miady irery, ary manohy ny tolona irery sisa ireo avy eo anivon’ny AV7, ka ho fahatsiarovana izany dia amin’ny fito ora maraina izy ireo anio no hanatitra voninkazo etsy amin ny tsangambaton’ny mahery fon’ny 7 Febroary. Mbola ao anatin’izay tolona izay ihany, dia mbola mitaky ny hampiharana ny didim-pitsarana nivoaka ihany koa ny AV7, izay nilazan’izy ireo hoe “gadrao Ravalomanana”. Eto izany na ireo efitrano goavana azon- dRajoelina tamin’ny rà latsak’ireo maritiora aza tsy foiny entiny hiara-hahatsiaro ireo izay namoy ny ainy nandritra ny 7 febroary 2009.
Mangina tanteraka manoloana ny fandikan-dalàna nataon’i Andry Rajoelina ny Ceni ( Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana) sy ny Governemanta amin’izao fotoana izao. Efa manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana tokoa mantsy ity filohan’ny Tetezamita teo aloha ...Tohiny